Chelsea Oo Diyaar U Ah Inay Dhageysato Dalabyada Uga Imaanaya Kooxaha Doonaya Xidigeeda Hudson-Odoi
HomeSuuqa kala iibsigaChelsea oo diyaar u ah inay dhageysato dalabyada uga imaanaya kooxaha doonaya xidigeeda Hudson-Odoi
December 5, 2020 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Ciyaaryahanka garabka uga ciyaara Chelsea Callum Hudson-Odoi ayaa lagu soo waramayaa in loo ogolaan karo inuu ka tago Stamford Bridge qaab amaah ah markii uu dib u furmayo suuqa kala iibsiga bisha Janaayo.
20 jirkaan ayaa seddex jeer shabaqa soo taabtay 12 kulan oo uu u ciyaaray kooxda ka dhisan Galbeedka London xilli ciyaareedkan, si kastaba ha ahaatee, waxaa ku adkaatay inuu boos joogto ah ka helo Premier League.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England ayaan xitaa ku jirin kooxdii la ciyaartay Tottenham Hotspur isbuucii hore, halka uu ciyaaray kaliya 31 daqiiqo oo kubada cagta ah tan iyo bilowgii bishii October.
Weeraryahanka reer England ee hibada leh ayaa mar kale lagu xamanayay inuu u dhaqaaqi doono kooxda heysata horyaalka Jarmalka Bayern Munich xagaaygii hore, si kastaba ha ahaatee, suuqa kala iibsiga ayaa xirmay iyadoo xiddiggu uu ku sii nagaaday Stamford Bridge.
Sida laga soo xigtay Eurosport, wakiilada ciyaaryahanka reer England ayaa la filayaa inay wadahadal la galaan Blues dhawaan si loo ogaado wadada ugu fiican, waxaana macquul ah inuu ka tago Janaayo muddo gaaban.
Hudson-Odoi wuxuu ku guuleystay inuu shabaqa soo taabto 11 jeer wuxuuna caawiyay 11 caawiye 73 kulan oo kooxda koowaad ee kooxda ka dhisan Galbeedka London, halka uu heshiis cusub oo waqti dheer ah u saxiixay kooxda reer London bishii Sebtember 2019.
Chelsea ayaa sidoo kale qorsheyneysa inay iska iibiso mid ka mid ah daafacooda bidix Marcos Alonso iyo Emerson Palmieri bisha Janaayo.